Ihowuliseyili Rolling Embossing Machine yoMvelisi kunye noMthengisi | Fumana ANGANG intsingiselo yesinti
Izitudiyo zokuhombisa kunye neerivets kumnyango wentsimbi eyenziweyo, iro ...
Indawo yokuQala Hebei, China Igama lebrand Anbang
Inombolo yomzekelo HBAB-LZ80 Inkonzo yasemva kokuthengisa Unyaka omnye
Umboniso wezinto eziphathekayo Flat Steel, Square Bar, Round Bar, Square Umbhobho embossing Uhlobo Ukubanda okubandayo
Indlela yoLawulo Ulawulo lweNkqubo yePC Amandla eMoto 5.5 KW
Ubunzima boomatshini I-650 KG Ubungakanani boomatshini 1570 * 630 * 1300MM
Dies Simahla 11 Izibuko Izibuko laseTianjin Xingang
Ixesha lokukhokhela 5-7 Iintsuku Zenzekelayo Ewe
Lo matshini unokusetyenziselwa ukuprinta uyilo kwizixhobo eziqhelekileyo zesinyithi kubandakanya isikwere, iflethi okanye isangqa intsimbi. Ezi zoyilo zinokukhethwa ngumsebenzisi. Inzuzo ebonakalayo yalo matshini kukuba ukufudumeza kwesinyithi akuyomfuneko.
Ukuthumela ngeeseti ze-9 zokubumba kunye neeseti ezi-2 zokuhlangana ziya kufa kuwe, kwaye sinokunceda ukuyila enye into oyifunayo.
Lo matshini sisixhobo esikhethekileyo sokuvelisa izixhobo zokwenza izinto. Inokuqhubekeka ngeentlobo ezahlukeneyo zentsimbi eyenziwe ngesinyithi, intsimbi yesikwere, intsimbi ejikelezileyo, ityhubhu yesikwere.
Lo matshini wamkela ulungelelwaniso lweemodyuli kuyilo olufanelekileyo kunye netekhnoloji ephezulu.
Ukuxhotyiswa ngesixhobo sokuguqula rhoqo ukuze isantya sokuqengqeleka esibandayo sinokulungiswa ukuze kuhlangatyezwane nemigaqo eyahlukeneyo yezixhobo.
Ukusebenza kwemveliso ephezulu, ukukhawuleza ukuya kwi-10 yeemitha ngomzuzu.
Imigca esongiweyo icacile kwaye intle. Zombini i-concave kunye ne-convex yentsimbi ethe tyaba inokuqengqeleka kakuhle.
Lo matshini kufakwa sokulinganisa, nkqo isixhobo. Ukusebenza ngokugqibeleleyo kokusebenza kulungile.
Eyenzelwe ngokukodwa ulawulo lwencwadi kunye nolawulo lokutshintsha unyawo, okwenza ukuba kube lula ukusebenza, kukhuseleke kwaye kuthembeke.
Buyisela ngumngundo kwindibano, okonga ixesha, okonga abasebenzi.
Ukutshatisa iiseti zomngundo ezili-13. Ayisiyiyo kuphela into eyahlukileyo yokubumba, efumanekayo ukuthengwa, kodwa ikwanceda abasebenzisi kuyilo nakwimveliso yokubumba.
Umba I-HBAB-LZ80 ebandayo eqengqelekayo ebhalwe
Ubungakanani bokuSebenza kwaMax ▄ Ubukhulu: 80mm × 10mm
● Ubukhulu: 30mm × 30mm
□ Ubukhulu: 80mm × 80mm
Ukusebenza kweMoto Amandla (KW) 5.5
Qaphela (V) 380
Rhoqo (HZ) 50/60
Ukuqhubekeka kokuSebenza Lo matshini sisixhobo esikhethekileyo sokuvelisa izixhobo zokwenza izinto, inokuqhubekeka intyatyambo ebandayo ebunjiweyo yentsimbi, intsimbi yesikwere, intsimbi ejikelezileyo, ityhubhu yesikwere.
2. umatshini wamkela ulungelelwaniso lweemodyuli kuyilo olusebenzayo kunye netekhnoloji ephezulu.
3.Xhotyiswe ngesixhobo esiguquliweyo sokuhamba rhoqo ukuze isantya sokuqengqeleka sinokuhlengahlengiswa ukuze kuhlangatyezwane nemigaqo eyahlukeneyo yemathiriyeli.
4. Ukusebenza kwemveliso ephezulu, ukukhawuleza ukuya kwi-10 yeemitha ngomzuzu.
5.Imigca eqengqelekileyo icacile kwaye intle, zombini iconcave kunye ne-convex flat iron zinokubanda ziqengqeleke kakuhle.
Umatshini we-6.6 uxhotyiswe ngokulinganisa, ukulungisa isixhobo. Ukusebenza ngokugqibeleleyo kokusebenza kulungile.
7.yenzelwe ngokukodwa ulawulo lwencwadi kunye nolawulo lokutshintsha unyawo, okwenza ukuba kube lula ukusebenza, kukhuseleke kwaye kuthembeke.
8. buyisela ukungunda ngokufanelekileyo, ukugcina ixesha.labor-saving.
9. ukumatanisa iiseti ezili-13 zokubumba, kungekuphela nje iintlobo ezahlukeneyo zokubumba, ezikhoyo ukuthengwa, kodwa nokunceda abasebenzisi kuyilo nakwimveliso yokubumba.
Ubungakanani bokuPakisha (mm) L × W × H = 1570 × 630 × 1300/850 × 530 × 480
I-NW (kg) / GW (kg) 1060/1210
Hebei Anbang Ornamental Iron Co., LTD, ibekwe kwisixeko shijiazhuang, kwiphondo hebei, thina nokuveliswa ngobuchule ekuveliseni zonke izixhobo zentsimbi zaza zenziwe, sinentsebenziswano kunye amakhulu abathengisi abavela kumazwe angaphezu kwama-30 kunye neendawo, sinako yenza zonke iintlobo zesamente, ezibunjiweyo kunye nokugxininisa izinto njengokuzoba okanye isampulu, ezinje ngeentyatyambo kunye namagqabi, imikhonto, iikhola, uqhagamshelo, ukuhonjiswa kwesango, iiphaneli zentsimbi, umsongo, iirosethi, ukubamba ngesandla, ucingo, isango kunye neefestile. oomatshini bentsimbi abenziweyo: umzekelo
Egqithileyo Yakha Rolling Machine
Okulandelayo: Isando somoya / amandla esinyithi sentsimbi
Umatshini woMatshini woMoya
Isiphelo Machine Ndiyila
Umatshini wokufudumeza isinyithi
Umatshini wokushicilela we-Metal
Metal Ukwenziwa Machine
Umbhobho weSangqa sePipe
Umatshini Welding Ball
Ngesanti kubunzulu baphantsi Ukugoba Machine
Ukunyathela iPosti, Ucingo lwegadi, Iphepha leSinyithi, Handrail Tube, Kucingo olubiyele, Ukuhonjiswa kweeGates zentsimbi,